Jen. Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) ayaa ku eedeeyey xildhibaanada Baarlamanka federaalka Somalia iney qeyb ka yihiin amaan darada ka jirta dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Indhacadde ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamanka aysan dooneynin in Al-shabaab laga ciribtiro dalka, taas bedelkeedna ay rabaan iney iska sii socdaan dilalka iyo qaraxyada ay geysaneyso kooxdaas.
“Sababta aan sidaas u leeyahay waxay tahay waxaa muddo ka hor loo geeyey sharcigii lagula dagaalami lahaa nimankan argagaxisada ah si ay u ansixiyaan hase ahaatee illaa howshaas ma aysan qaban, weyna hor taagan yihiin” ayuu intaa ku daray Indhacadde.
Waxaa uu xusay in madaxweynaha, xukuumada iyo laamaha amaanka aysan eed ku laheyn amaan darada jirta maadaama xildhibaanadu diidan yihiin iney meel mariyaan sharciga la dagaalanka argagaxisada ee lagula dagaalami lahaa kooxaha amaan darada ka shaqeynaya.
Xildhibaanada baarlamanka ayaa sanadkii hore loo gudbiyey sharciga la dagaalanka argagaxisada oo ay soo diyaarisay xukuumadii RW Saacid.
Dhinaca kale, waxaa uu soo dhoweeyey howlaha ay wado maxkamada ciidamada qalabka sida oo dhowaan xukuno toogasho ah ku riday kuna fulisay rag badan oo lagu helay iney ka tirsan yihiin Al-shabaab kuwaasoo geystay dilal iyo qaraxyo.